မြ၀တီ - တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Tuesday, 18 December 2018 09:17 font size decrease font size increase font size
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးံ. H.E. Mr. Vikram Misri အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်းမြင့်သာရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြည်းတပ် စစ်သံမှူး၊ ရေတပ် စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အိန္ဒိယသမ္မတကြီး၏ မြန်မာနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် အောင်မြင်မှု အခြေအနေများ၊ တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိခြင်းကြောင့် နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရသည့်စိန်ခေါ်မှု များနှင့် အခက်အခဲများအပေါ် အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အားပေးထောက်ခံရပ်တည်ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်စေရေးအတွက် အဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင် များအပြင် စစ်မှုထမ်းများ အဆင့်လိုက် ချစ်ကြည်ရေးခရီးများ အပြန် အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း အပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး တက်ရောက် လာကြသူများ နှင့်အတူ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက် ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 379 times Last modified on Tuesday, 18 December 2018 09:23
More in this category: « အင်းလေး ဓမ္မာရုံ (နေပြည်တော်)၊ ရတနာ ပန္နက်တော်တင်နှင့် ရတနာ အုတ်မြစ်တော်စီ မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပ (၃၁)ကြိမ်မြောက် သာသနာ့ဝန်ဆောင် သာမဏေကျော် စာတော်ပြန်ပွဲ ဖြေဆိုနေသည့် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်း »